Uganda oo sheegtay inaysan isku dhigmin mushaarka Ciiddankooda ka tirsan AMISOM iyo Khatarta ay kala kulmaan Somalia. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Xildhibaanadda Guddiga Difaaca iyo Arrimaha Gudaha ee Barlamaanka Uganda ayaa sheegay inay moral xumo soo wajahayso Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM, kadib, markii ay Midowga Europe “EU”-da dhimeen Kharajka Mushaarka ee la siin jirey Ciiddanka AMISOM.
Guddiga Barlamaanka Uganda waxay sheegeen in Ciiddanka qeybta ka ah AMISOM laga jaray mushaarkii, isla markaana dib loo dhigay bixinta mushaarkooda muddo 4 bilood ah.
Xildhibaanadda Uganda waxay Xukuumadda Uganda u qabteen muddo 3 bilood ah inay Warbixin ka keenaan macaashka dhaqaalaha ee uu dalka ka helo doorka Ciiddanka Uganda ee Hawlgalka AMISOM iyo inay Xukuumadda Uganda dib u eegto Shuruudaha la xiriira Hawlgalladda AMISOM.
Xildhibaanadda Barlamaanka Uganda waxay sheegeen inay doonayaan inay Dowladda Uganda ku gacan-sayraan go’aanka Midowga Europe ku jareen Mushaarka Ciiddanka AMISOM, isla markaana inuusan dakhliga la siiyo Askarta u dhigmin halista ay Ciiddanka kala kulmayaan Hawlgalka AMISOM.
Dhinaca kale, Ururka Midowga Europe waxay bishii Janaayo ku dhawaaqeen inay 20% jareen Kharajka Mushaarka Ciiddanka AMISOM, taasi oo la micno ah in Askari kasta oo ka tirsan AMISOM mushaarkiisa bisha laga dhimay 400-Dollar.
EU-da waxay Askari kasta oo ka mid ah Nabad-ilaaliyaasha Uganda ee Hawlgalka AMISOM bishiiba mushaar u siin jireen lacag dhan 1,028 Dollar, balse mushaarka laga jaray 20% oo ay u dheer tahay 200-Dollar oo ay Dowladda Uganda ka jarto Askari kasta, taasi oo micnaheedu yahay in Askari kasta oo Ugandese ah oo ka tirsan AMSIOM mushaar ahaan bishii loo siinayo lacag dhan 628 Dollar.
Si kastaba ha ahaatee, Midowga Europe waxay Hawlgalka AMISOM sannadkiiba ku bixin jireen lacag dhan 200 million oo Dollar.
Al Shabab oo weerartay xerada AMISOM ee duleedka Qoryooley